ဖက်ထုပ်ကြော် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
22 comments on “ဖက်ထုပ်ကြော်”
18/06/2012 @ 2:55 am
woww… nice nice .. love it dumpling.
18/06/2012 @ 2:54 pm
18/06/2012 @ 3:59 am
yammy yammy Ma ei .I made sometimes and that is my family favourite food.Your blog is great and I always visit your blog.Thanks alot for sharing.
19/06/2012 @ 4:24 am
Hi ei, can you let me know the dumpling sheet sample , is it the same as spring roll sheet or not.my hubby wanna eat so much when he saw ur fried dumpling but i didn’t find this sheet at supermarket around my home.maybi don’t know that sheet ;D.
19/06/2012 @ 3:03 pm
19/06/2012 @ 12:12 pm
20/06/2012 @ 1:37 am
ဓါတ်ပုံလင့်လေးပေးတဲ့ အတွက်ရောဖက်ထုပ် ကြော်နည်း ၊ဖက်ထုပ်ခေါက်နည်း ပါပေးတဲ့ အိသက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
20/06/2012 @ 5:48 pm
welcome par naw 🙂
20/06/2012 @ 12:44 pm
ဖက်ထုပ်ကလေးတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ စားချင်စရာလေး လုပ်စားကြည့်အုံးမယ် ကျေးဇူးပါပဲနော်
20/06/2012 @ 5:49 pm
hote ma su 🙂
09/07/2012 @ 5:22 am
မအိသက်ရေ… ဖက်ထုပ်လေးတွေကိုခေါက်ပီး ကွာမသွားအောင်လို့ အပေါ်က ဂျုံမှုန့် လေးတွေ ဖြူးထားတာလား.. ဒါမမဟုတ် ဒီတိုင်းထားလည်း ရလားဟင်..
10/07/2012 @ 12:37 am
အနားလေးတွေ ရေဆွတ်ပြီးခေါက်တာပါ ဒီတိုင်းပဲညီမ မကွာသွားဘူး 🙂
06/09/2012 @ 2:26 am
07/09/2012 @ 9:11 pm
sis yay, i will do it one weekend naw.:)
16/09/2012 @ 9:39 am
အစ်မရေ အစ်မ တင်ထားတဲ့ post အားလုံးက ကျနော့် အကြိုက်တွေချည်းပဲ တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ five spice powder ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ ပြောပြပေးလို့ ရမလား တင်ထားတဲ့ post တွေ အားလုံး အတွက် ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် ကျနော်က အချက်အပြုတ် ၀ါသနာပါလို့ပါ 🙂
16/09/2012 @ 11:27 am
07/12/2012 @ 1:17 pm
a ma ,phat htoke koda taing paung yin kaw ya lar?
07/12/2012 @ 3:16 pm
ya tae nyi ma lay 🙂
18/06/2013 @ 4:41 am
01/08/2013 @ 9:36 am
ကျေးဇူးပဲ မအိသက်ရေ..။ ဖက်ထုပ်အလှည့်ရောက်လာပြီ..။
02/08/2013 @ 8:39 am